एकै दिन ३९६ पालिकामा शिलान्यास भएका आधारभूत अस्पताल: वर्ष बित्यो, निर्माण सुरु भएन यतिबेला संसार कोरोना संक्रमणको अर्को चरणबाट आक्रान्त छ। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको त्रास र तेस्रो लहर आउने जोखिम बढिरहँदा ती अस्पतालहरुको निर्माण गतिले भने महामारीको अवस्था छ भन्ने अनुभूति नै हुँदैन। आइतबार, मंसिर १९, २०७८
स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्तामा सरकारको 'मजाक', अर्थमै थन्कियो प्रस्ताव संघीय सरकार मातहतका १४ वटा अस्पतालले १० करोड ६३ लाख ३१ हजार, प्रदेशतअन्तर्गतका ५ अस्पतालले २ करोड १६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, स्थानीयत तहअन्तर्गतका ३१ पालिका र अस्पतालमा गरी ३ करोड १७ लाख जोखिम भत्ता पठाउन बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबार, कात्तिक १४, २०७८
फाइजर र मोडर्ना खोप भण्डारणका लागि यस्तो छ सरकारको तयारी सरकारले बालबालिका लागि माइनस डिग्री तापक्रममा भण्डारण गनुपर्ने खोप फाइजर ६० लाख र ४० लाख मोडर्ना खोप खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। सोमबार, भदौ २१, २०७८
सेरो प्रिभिलेन्स सर्भे - २५ संक्रमितमध्ये एकजना मात्रै सम्पर्कमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका डा पौडेलले सातै प्रदेश, हिमाल, पहाड, तराई, गाउँ, शहरका सबै लिंग, उमेर, पेसा तथा सबै समूहमा समान एन्डीबडी देखिएको बताए। शनिबार, भदौ १९, २०७८
के सरकारले फाइजर खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको हो? मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीले नेपालको उक्त पत्रमा जवाफ पठाउँदै ‘नेपालमा कति खोप आवश्यक छ?’ भनेर सोधेको छ, तर नेपालले अझै पनि कति खोप आवश्यक छ भन्ने जवाफ पठाउन सकेको छैन। बुधबार, साउन १३, २०७८
स्वास्थ्यका कर्मचारीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको जिज्ञासा– फाइजर खोप कसरी ल्याउन सकिन्छ, के भइरहेको छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले फाइजर खोप १२ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले ल्याउन पहल भइरहेकोबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई जानकारी गराएको थियो। बुधबार, असार ३०, २०७८
कहिले आउँछ कोभिड खोप? खरिद प्रक्रिया के हुँदैछ? अहिलेकै अवस्थामा अझै केही समय नेपालीले कोभिड खोप लगाउन पाउने संकेत देखिँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै छिटै खोप आउने सम्भावना नरहेको बताइरहेका छन्। बुधबार, असार ९, २०७८
कोभिड अस्पतालले संक्रामक फोहोरको व्यवस्थापन कसरी गर्छन्? संक्रमितको उपचारमा खटिएका यी सुरक्षा कवच र अन्य फोहोर पनि संक्रामक हुने खतरा उत्तिकै रहन्छ। अस्पतालका अन्य फोहोरभन्दा यी फोहोरको विशेष र वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। सोमबार, असार ७, २०७८
कोरोना महामारीमै फेरिए तीन स्वास्थ्यमन्त्री नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएदेखीको डेढ वर्षको अवधिमा ३ जना मन्त्री फेरिएका छन्। यो महामारीको अवधिमा भानुभक्त ढकाल, हृदयेश त्रिपाठी र अहिले शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री भए। शुक्रबार, जेठ २१, २०७८
सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्नु कति व्यावहारिक? यी हुन् आफ्नै प्लान्ट भएका ५८ अस्पताल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशका ५८ अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान छन्। तीमध्ये कतिपय अस्पतालका प्लान्ट बिग्रिएका छन्। बिहीबार, जेठ २०, २०७८
खोप भण्डारणमा अझै समस्या, बनेन प्रदेशमा कोल्ड रुम प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा कोल्ड रुपमा बनाउन जग्गाको टुंगो लगाउन नसक्नु, समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न अग्रसरता नदेखाउनुले एक वर्ष बित्न लाग्दा समेत कोल्ड रुप बन्न नसकेको कर्मचारीको टिप्पणी छ। बुधबार, जेठ १९, २०७८
...त्यसपछि पुरुष स्वास्थ्य स्वयंसेवक हटाइयो र महिला मात्र हुने व्यवस्था भयो २०४५ सालको कुरा हो। त्योबेला काभ्रेको सुशीला थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो समय महिला पुरुष जो पनि स्वास्थ्य स्वयंसेवक हुन पाउने व्यवस्था थियो। मंगलबार, जेठ १८, २०७८
बजेटमा स्वास्थ्य : महत्वपूर्ण कार्यक्रम छुटाइयो, केहीलाई काम बिनै निरन्तरता राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र र फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन एफडिए स्थापना लगायतका विषय भने समावेश गरिएको छैन। कोभिड भाइरसको संक्रमण सुरु भएयता निकै महत्वका साथ हेरिएको यो विषय बजेटमा किन समावेश भएन? शनिबार, जेठ १५, २०७८
आक्रमण गर्न आएपछि ट्वाइलेटको झ्यालबाट हाम फालेर ज्यान जोगायौं त्यसको एक घण्टापछि बिरामीको मृत्यु भयो। अनि उहाँहरु ७, ८ जना आएर सिस्टरलाई हातपात गर्न लागे। एक जना सिस्टरको घाँटी समाते। शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
भेरी अस्पतालमा तीन हप्तामा चारपटक डाक्टर र नर्समाथि हातपात दोषीलाई पावरकै भरमा कारबाही नगर्दा पटकपटक स्वास्थ्यकर्मीमाथि भौतिक आक्रमण हुने क्रम बढेको बताइन्। दोषीलाई कडा कारबाही नभएसम्म काम गर्ने मनोबल नबढ्ने समेत उनले बताइन्। शुक्रबार, जेठ १४, २०७८
कोभ्याक्सले नेपाललाई भन्यो- कोभिसिल्डको विकल्प खोज्नू भारतको सेरम इन्स्टिच्यूट अफ इन्डियाले तत्काल खोप दिन नसक्ने भएपछि कोभ्याक्सले नेपाललाई कोभिसिल्डको विकल्पमा अर्को कुन खोप उपयुक्त हुन्छ भनेर विकल्प मागेको छ। बुधबार, जेठ १२, २०७८
गत वर्ष कात्तिक र मंसिर महिनामा नै थपिएका थिए सर्वाधिक संक्रमित २०७६ माघमा देखिएको संक्रमण असोज २३ गतेसम्म एक लाख नाघेको थियो। भने मृत्यु हुने संक्रमितको सख्या ६ सय थियो। तर, उक्त दुई महिनाको अवधि नै झण्डै यो संख्या दोब्बर भयो। दुई महिना करिब एक लाख व्यक्तिमा संक्रमण भयो भने ५८४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ। आइतबार, जेठ ९, २०७८
चीनले राख्यो कोभिड खोप खरिदका लागि ‘नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’को प्रस्ताव चीनले नेपालसँग कोभिडविरुद्धको खोप खरिद गर्ने भए ‘नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ अर्थात गोप्य सम्झौताको प्रस्ताव रोखको छ। सरकारले चीनसँग एक करोड डोज खोप खरिदका लागि छलफल गरेको थियो। पहिलो चरणमा २० लाख डोज खोप किन्ने नेपालको तयारी छ। शुक्रबार, जेठ ७, २०७८
अक्सिजन अभाव कि कृत्रिम अभाव? मन्त्रालयले पहुँचवालाकै घरमा सिलिण्डर लुकाइएको जानकारी पाएपछि सार्वजनिक रुपमा घरमा सिलिण्डर नराख्न सूचना पनि निकाले छ। मंगलबार, जेठ ४, २०७८
कोभिड वार्डमा कार्यरत नर्स भन्छिन्- मृत्यु संख्या छिट्टै कम भइदिए हुन्थ्यो लामो समय पिपिइ लगारहँदा श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अरु समयमा शरीर दुख्ने, थकाइ लाग्ने भइरहन्छ, जसको कारण अहिलेपनि संक्रमित छु झै लाग्ने रहेछ। कमजोरी अनुभव भइरहेको हुन्छ। बुधबार, वैशाख २९, २०७८
कोरोना संकटको १५ महिना, तर खोइ स्वास्थ्य सेवाका सचिव? स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी मात्र होइन विज्ञहरुले समेत प्राविधि मन्त्रालयमा प्राविधिक सचिव नै हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीकै इच्छा अनुसार स्वास्थ्यमा प्रशासन तर्फको सचिव मात्र नियुक्त हुने गरेका छन्। बुधबार, वैशाख २२, २०७८
डा अनुप बास्तोलालाई प्रश्न: के अक्सिजन घरमा राखेर कोरोना उपचार हुन्छ? के अक्सिजन घरमा राखेर कोरोना उपचार हुन्छ? शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप बास्तोलालाई हामीले यही प्रश्न गरेका छौं। शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८
बाँकेमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर बाँकेमा सक्रियको संक्रमितको सख्ंया बढेपछि उपचार र व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। बाँकेमा हाल एक हजार ६५४ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८
भिडियो वार्ता : कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ नेपालगञ्जमा कसरी हुँदैछ उपचार? आइतबार, वैशाख ५, २०७८
नाकामा निस्फिक्री आवतजावत [भिडियो] स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नाकामा स्वास्थ्य जाँच लगायतका व्यवस्थापन गरेको भनेपनि यथार्थ भने फरक छ। नाकाबाट भित्रिने नागरिकको व्यवस्थापन सरकारले गरेको देखिँदैन। केन्द्रमा गरेका कुराहरु भाषणमा मात्र समिति देखिन्छ। शुक्रबार, वैशाख ३, २०७८
कोभिड बिरामीको उपचारका लागि पहिलेभन्दा निकै सक्षम छौंः डा नितेश कनोडिया गम्भीर खालका बिरामी पनि बढ्न थालेपछि त्यो समय निकै गाह्रो भएको थियो। त्यही बिचमा हाम्रो अस्पतालका दुई जना कर्मचारीलाई कोभिडकै कारण हामीले गुमाउनु पर्‍यो। निमोनिया भएर गम्भीर भएका बिरामीको उपचारमा पनि समस्या थियो। बिहीबार, वैशाख २, २०७८